Dagaal Culus ayaa ka dhacay Deegaanka Balli doogle | maakhir.com
Dagaal Culus ayaa ka dhacay Deegaanka Balli doogle
January 25, 2008 in Somalia
Balidoog:-Dagaal culus ayaa saaka waaberigii ka dhacay xero ciidamada dowldadda KMG ah ay ku leeyihiin Ballidoogle oo u dhaw degmada Wanla weyn ee gobolka Shabeellaha Hoose,dagaalkaasi ayaa waxa soo qaaday Kooxo ka soo horjeeda Ciidamada Dawlada Somaliya waxan laysu adeeg saday hubka Cul Culus.
Dagaalkaasi oo Bilawday hiirtii waa bari ee sakaa ayaa waxa uu ahaa mid ku bilawday Xaalad xun oo dhamaanba laga maqlayay duryanka Madaacfiicda goobaha ku dhaw dhaw aagagaasi.
Dagaalka ayaa la sheegay in ugu yaraan ay ku dhinteen shan qof oo kooxaha dagaallamayay ah, inkastoo aan la ogeyn khasaaraha kale ee uu gaarsiiyay dadka shacabka ee nool deegaankaasi.
Lama garanayo ujeedka ka danbeeyay inuu dagaalkaasi qarxo walaw ay jiraan warar sheega inay markii hore weerarka soo qaadeen Kooxahaasi ka soo horjeeda Dawlada xili ay ciidamada Dawladu ku sug naayeen Xeradooda.
Wararka ayaa iyana sheegaya in dhamaan goobihii uu ka dhacay dagaalkaasi ay haatan joogaan ciidamo aad u fara badan kuwaasi oo ku qalabaysan gaadiidka dagaalka.
Dagaalada u dhexeeya ciidamada Ethiopia iyo kooxaha ka soo horjeeda ayaa waxa ay sababeen in boqolaal kun oo qoys ay ka qaxaan deegaano badan oo ka mid ah Soomaaliya, oo ay u weyn tahay caasimada Muqdisho.
« Nuur Cadde iyo Masuul sare oo ka tirsan Midawga Afrika oo Kulmay
Shiikh Shariif ayaa eedayn u soo jeediyay Ururka Midawga Afrika »